Ipad - Bogga 2 - Geofumadas
Mowduucyo farsamo oo aad u yar oo ku saabsan Shirweynaha Baarista
Waad salaaman tahay, waxay ahayd shirweyne runtii wax soo saar leh, oo muhiim u ah Guatemala iyo daqiiqad muhiim u ah gobolka Bartamaha Ameerika. Kahor intaanan kahadlin dhinacyada farsamada ee munaasabada - oo kaliya xiisaynaya aqristayaasheeda-, oo aan ku madadaalin doono maalmaha soosocda, waxaan rabaa inaan ka faaidaysto fursad aan kusii daayo qaar kamid ah macnaha guud ee ku saabsan baastada xorta ah ee aan haysto ...
ipad egeomates My
Leisure / waxyi, safarka
Uguyaraan seddex majalladood bishaan waxay la yimaadeen maqaallo xiiso leh oo ku saabsan deegaanka geospatial, iyo qaar ka mid ah walaayaasheena geeky, hoosta waxaan ku soo jeedinayaa 10 mowduuc oo loogu talagalay waqtigaaga akhriska ee caafimaadka qaba. Geoinformatics Waxaan ugu jeclahay joornaalada kaladuwan, waxaan la imaanayaa xiisaha mowduucyada soo socda: ISIP, Nidaamka ...
Apple - Mac, Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, qgis
GIS Kit, ugu danbeyn waxtar u ah iPadka
Ugu dambeyntii waxaan arkaa codsi runtii soo jiidasho leh oo loogu talagalay iPad-ka oo ku wajahan qabashada xogta GIS ee berrinka. Qalabku wuxuu leeyahay awood waxyaabo badan, wuxuuna ka tagayaa codsiyada aan isku dayay sida GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ee iPad-ka iyo GISRoam xafaayadaha; kan dambe oo awood badan laakiin aan saaxiibtinimo badan lahayn oo uu shaqeeyo oo diiradda la saaro falanqaynta ...
Tilmaamo si aad u hesho caadadaada ee Ipad
Waxba kama fiicna kiiboodhka 'Zagg' inuu ka shaqeeyo iPad-ka, kaas oo sidaan horeba u muujiyey ii adeegto sidii wax laga naxo nuugista hal mitir oo dhibic ah oo shubka ah. Laakiin socodku had iyo jeer maahan nimco, sidaa darteed halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad ugu adeegsato kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah. 1. Ma fiicna in caadooyinka xun la qaato.
Aad baan ugu raacsanahay Führer
Fiidiyowga wanaagsan ee barafka lagu jebiyo kahor inta uusan bilaabin koorsada ArcGIS. Qalabka aadka u fiican, xitaa ka fiican Ipad iyo Pokemon.
ArcGIS-ESRI, Leisure / waxyi
Wargeysyada 3, 3 mawduucyada
PC Magazine, cadad dijitaal ah bishii Julaay 2011, ayaa yimid maanta oo kale.Waxaan fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan ku dhiirrigeliyo mowduuc aan ku madadaaliyay halkan isbeddellada aan ka soo noqoshada lahayn ee soo noqoshada si aan wax walba ugu qabanno cidiyahayaga Waxaan sidoo kale ku dhiirrigeliyaa talooyinka dhammaadka xiisaha laba joornaal oo dheeraad ah oo ku saabsan jawiga deegaanka ee ay jiraan ...
Dhinaca kale ee IPad
Galabta qoyska, wax sidan oo kale ah si aan u dheellitirin cadaadiska. Waxaan rabay inaan sameeyo qoraalkan si aan ugu dheelitiro sawirrada gabadhayda ee iPad-ka, waaba intaasoo ay ku dagaallamaan. Tani waa dhinac kale oo cirka ka mid ah, sawirradii ugu wanaagsanaa ee aan ka soo qaaday waxay ku farxaan dalagga iyadoo maraq ...
Sida loo Qabto Screen Ipad
Waxaan ku noolnahay waqtiyada cuntada degdegga ah, wax walba waxay ku socdaan waddada, qaab ahaan, loo qiyaasi karo oo ay isugu dhow yihiin. Si aad u badan si aan wax uga baranno duulimaadka. Muddo ku dhow lix bilood oo aan isticmaalayay iPad-ka, waxaa igu soo dhacday sida aan u samayn karo waxa ku yaal desktop-ka aan ugu yeerno "shaashadda daabacan" ama loo tarjumay ...
Apple - Mac, Leisure / waxyi
Sida loo gudbiyo faylasha Ipad ilaa PC
Ka shaqeynta kiniiniyada waa dhaqan ay tahay inaan la qabsano, maxaa yeelay waa isbedel aan si cad looga soo kaban karin. Xaaladdan oo kale waxaan arki doonaa sida loo xalliyo arrinta gudbinta xogta u dhexeysa PC iyo Ipad ugu yaraan saddex ikhtiyaar. 1. Itunes adoo adeegsanaya Tani waa laga yaabaa inay tahay sida ugu macquulsan, maadaama ay ...
Blogsy, oo loogu talagalay blogyada laga helo IPad
Waxay u muuqataa inaan ugu dambeyntii helay codsi iPad ah oo la aqbali karo oo u oggolaanaya qorista iyada oo aan xanuun badan lahayn. Ilaa hadda waxaan isku dayayay BlogPress iyo midka rasmiga ah ee WordPress, laakiin waxaan u maleynayaa in Blogsy uu yahay midka la doortay marka loo eego wax ka beddelka ama ka yaraanta saaxiibtinimada WYSIWYG. In kasta oo ay tahay inaan ku xalliyo adeegga sawirro lagu martiqaaday ...
Apple - Mac, Internet iyo Blogs, safarka
Gaia GPS, si ay u qabsadaan GPS, Ipad iyo jidadka mobile
Waxaan soo degsaday codsi ku saabsan iPad-ka oo iga tagay in ka badan qanacsanaanta, baahida aan u qabay inaan sameeyo raadinta gps ka dibna aan ku arko internetka ama Google Earth. Kani waa Gaia GPS, codsi ku kacaya kaliya $ 12 laakiin si waxtar leh u shaqeynaya ...
Apple - Mac, GPS / Qalabka
Majaladda PC, oo u guureysa nooca dhijitaalka ah
Waqti dheer ka hor oo ah joornaalkan qaybtiisa Ingiriisiga ah ayaa sameeyay hawlgabnimadiisa, in kasta oo nooca Hispanic-ku uu ku dhawaaqay, daaqadaha waaweyn ee suuqyada ayaa sii waday inay muujiyaan nuqulo. Ugu dambeyntiina, kadib markii aan dhowr bilood weydiisanayay, waxaan aqbalay in Televisa ay ugu dambayntii joojisay wax soosaarkii daabacaadda waxaanan dareemayaa ...
Apple - Mac, Internet iyo Blogs
2011: Waxa laga filayo: Ajandooyinka CAD
Waad salaaman tihiin asxaabteyda, xafladihii, cohetillos, nacatamales iyo isku duubnida sanadka cusub. Way fiicantahay inaad ku laabato dhinacan nolosha, sanad wanaagsan oo war ah. AutoCAD wuxuu yimaadaa 3 sano kadib markii uu rogay interface-ka halkaasna waxaa la sheegay in tani ay noqon karto sanad ...
Ipad, 43 codsiyada aan jeclaa
Ciyaar, ku ciyaarista kiniinkan waxaan soo jeedinayaa in la joojiyo isticmaalka laptop-ka bilowga sanadka soo socda. Hubin la'aantahayga haddii ay tani runti suurtagal tahay ayaa igu hoggaamisay inaan raadiyo aaladaha aasaasiga ah ee beddelaya wixii aan sameeyo - oo aan joojiyo sameynta - howlahayga caadiga ah. Habka hawlgalka Apple ayaa xiiso leh ...
Waxa la dhaho, markaan dhowr saacadood ka maqnaado si aan fasax u aado, waxaan la socodsiiyaa waxa ay dabayshu rabto inay qarxiso iyo in f * cked kor u kacday maxaa yeelay hadafkii dahabiga ahaa ma sii ansaxayo. In kastoo dhowr mowduuc aan ku baryay anigoo ilmaynaya. Dhibaatada Honduras Waa hagaag, war badan ma ahan. Waxaa jira oo kaliya…
AutoCAD WS, ugu fiican ee AutoDesk ee shabakadda
AutoCAD WS waa magaca ay ku dagtay Mashruuca Balanbaalisku, ka dib AutoDesk ka dib isku dayo badan oo ay la yimaadeen iyagoo doonaya inay la falgalaan websaydhka, waxay heleen shirkadda Israel Sequoia-Backed, oo ka shaqaynaysay PlanPlatform si ay ula falgalaan faylasha dxf / dwg ee shabakadda. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu rajo-gelinta badan ee loo yaqaan 'AutoDesk applications', gaar ahaan tan ugu weyn ee loo adeegsado ...
AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 page Next